Hordhaca Kulanka Champions League Caawa ee kooxaha PSG Vs Chalsea | Hangool News
Hordhaca Kulanka Champions League Caawa ee kooxaha PSG Vs Chalsea
Bilihii ugu danbeeyay ee Jose Mourinho ee Chelsea waxa ay ahaayeen kuwa musiibo ah laakiin waxa uu maareeyay inii Blue u soo saaro wareega 16ka Champions League oo ay ku soo baxaan kaalinta koowaad ee group-kooda.
Kulan wareega 16ka oo ay la ciyaaraan Paris Saint-Germain ayaa aheyd wixii ugu danbeeyay ee ay doonayeen taageerayaasha Stamford Bridge laakiin waxa ay ina siineysaa inteena kale kulan xiiso iyo xamaasad leh.
Ku celiska kulankoodii hore ee xilli ciyaareedkii hore Chelsea ayaa raadineysa inay ka aargudato dhigooda kooxda Faransiiska.
Waxa ay u safrayaan Parc des Princes kulanka lugta hore, laakiin goormee ayaa la ciyaarayaa, halkee ayaase ka daawan kartaa?
10 waxyaabood oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato…
1. Waa goorma ciyaarta, halkee ayaadna ka daawan kartaa?
Paris Saint-Germain iyo Chelsea waxa ay caawa iska horimaan doonaan 10:45pm Saacada Geeska Afrika, iyadoo ciyaarta laga dawan karo BT Sport iyo sidoo kale beIN Sport.
2. Maxaa ka cusub kooxaha?
PSG: Kooxda heysata horyaalka Faransiiska ayaa dib u soo yeeraneysa Zlatan Ibrahimovic, kabtan Thiago Silva iyo Thiago Motta kuwaasoo dhamaantood la nasasiiyay kulankii ay barbaraha la galeen Lille sabtidii.
Waxaa ka maqnaan doona Serge Aurier kaasoo ay kooxda gaanaxday ka dib markii uu aflagaadeeyay tababare Laurent Blanc. Marco Verratti kuma soo bilaaban doono inkastoo uu ka soo laabtay dhaawac uu labo isbuuc la maqnaa sabtidii.
Chelsea: Blues waxaa ka maqnaan doona kabtan John Terry kaasoo ku seegaya dhaawac jilibka ah lama uusan safrin kooxda inteeda kale.
Oscar oo dhibaato ka qabay kubka ayaa ku soo laabtay kooxda, halka Alexandre Pato uusan safrin, Nemanja Matic ayaa isna ganaax ku maqan.
3. Shaxda Macquulka Ah
Paris Saint-Germain: Trapp; Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Maxwell; Matuidi, Thiago Motta, Rabbiot; Di María, Ibrahimović, Cavani.
4. Sababo ay niyadsami ku dareemi karaan jamaahiirta PSG
Lagama badinin 23kii kulan ee ugu danbeysay tartamada oo dhan iyo 44 kulan ee ugu danbeysay ee tartamada maxaliga ah.
PSG ayaa badisay 17 kulan oo isku xigta ka hor inta aysan sabtidii barbaro 0-0 la galin kooxda Lille.
Kooxda heysata horyaalka Faransiiska ayaa ka reebtay Chelsea koobka Champions League xilli ciyaareedkii hore.
5. Sababo ay niyadsami ku dareemi karaan jamaahiirta Chelsea
Blues iyaga laftooda lagama badinin 12 kulan oo isku xigta.
Inkastoo ay ku dhibtoonayaan Premier League, Chelsea ayaa badisay afar kulan islamarkaana barbaro gashay hal kulan lixdii kulan ee ay ciyaareen wareega group-yada Champions League.
Waxa ay kulankaan ciyaarayaan iyagoo sabtidii 5-1 ku soo xasuuqay kooxda Newcastle horyaalka Premier League.
6. Shantii kulan ee ugu danbeysay ee ay iska horyimaadeen
March 11 2015: Chelsea 2-2 PSG (Champions League)
February 17 2015: PSG 1-1 Chelsea (Champions League)
April 8 2014: Chelsea 2-0 PSG (Champions League)
April 2 2014: PSG 3-1 Chelsea (Champions League)
November 24 2004: Chelsea 0-0 PSG (Champions League)
7. Qaab ciyaareedkoodii ugu danbeeyay
PSG – Shantoodii kulan ee ugu danbeysay
PSG 0-0 Lille (Ligue 1)
PSG 3-0 Lyon (Coupe de France)
Marseille 1-2 PSG (Ligue 1)
PSG 3-1 Lorient (Ligue 1)
St Etienne 0-2 PSG (Ligue 1)
Chelsea – Shantoodii kulan ee ugu danbeysay
Chelsea 5-1 Newcastle (Premier League)
MK Dons 1-5 Chelsea (FA Cup)
8. Ninka isha lagu heyn doono ee PSG
Meel kasta oo uu aado waa uu badiyaa. Zlatan Ibrahimovic ayaa xajistay booskiisa ah inuu ka mid yahay gooldhaliyayaasha dunida ugu fiican, Chelsea ayaana ku qasbanaan doonta inay ku aamusiso caasimada dalka Faransiiska.
Xitaa isagoo jira 34 sanno Zlatan ayaa dhaliyay 21 gool kaliya 20 kulan oo uu ilaa iyo haatan saftay horyaalka Faransiiska, waxa uu lix kale ka dhaliyay Coupe de France iyo Champions League.
Waxa uu noqon doontaa ismuujiyo, waxa uu noqon doonaa mid ka careysiiya ciyaartoy badan, laakiin sidoo kalena waxaa jiri karta fursad uu ku noqdo xiddigii PSG u badin lahaa kulanka caawa.
PSG ayaa ka rajeyneysa xiddiga reer Sweden inuu faa’ido weyn u soo hooyo ka hor inta aysan 9ka bisha March u safrin Stamford Bridge.
9. Ninka isha lagu heyn doono ee Chelsea
Haddii ay Chelsea ku soo laabaneyso Stamford Bridge iaygoo kalsooni ku qaba inay soo baxaan waxa ay u baahan yihiin difaac xoogan iyo inuu Gary Cahill is muujiyo.
Iyadoo uu John Terry maqan yahay waxa ay mas’uuliyada difaaca dusha ka saaran tahay Cahill oo ay tahay inuu agaasimo afarta daafac ee danbe, waxaana ay u badan tahay in Branislav Ivanovic uu daafac dhexe kala ciyaari doono halka Cesar Azpilicueta iyo Baba Rahman ay garbaha daafaca ka ciyaari doonaan.
Cahill boos joogta ah ma uusan heysanin xilli ciyaareedkan ilaa iyo isbuucyadii ugu danbeysay, waxaa xitaa la hadal hayay inuu baxayo bishii Janaayo si uu u raadsado kubad joogta ah ka hor ciyaaraha Euro 2016.